Maingear Nnukwu Super Ngwaahịa X99 arụmọrụ Gaming Desktop PC Preview
Nyocha ahia Kọmputa & Mbadamba
Maingear Super Stock X99
Arụmọrụ arụmọrụ arụmọrụ nwere ike ịrụ ọrụ na-eji Haswell-E na DDR4
Site na emeputa
Dec 15 2014 - Maingear Shift Super Stock X99 bụ usoro aghụghọ aghụghọ. O yiri ka ọ dị ọnụ ọnụ ma na nhazi ya, arụmọrụ na-eme ka ihe dị ukwuu. N'ezie, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa nwere ike ịmara nke a ma chọọ ịhazi ya maka ịrụ ọrụ kachasị oke ma dị njikere ịnakwere ụtụ ego. Ụlọ ọrụ ahụ na-enye ọtụtụ nhọrọ maka nhazi. Naanị ka a dọọ gị aka ná ntị na ụgwọ a ga-akwụrịrịrịrị elu karịa iwuli onwe gị .
Arụmọrụ siri ike ma ọ bụrụ na ha ahazi elu Stock
Gburugburu Ebe Nhọrọ Nhazi
Nwelite ngwa ngwa mee ka Ahịa a
Nhọrọ ndị ọzọ bara uru na arụmọrụ kwesịrị ekwesị
16GB PC3-21300 DDR4 Ebe nchekwa
NVIDIA GeForce GTX 750Ni Kaadị eserese Na 2GB Memory
Isii USB 3.0, anọ USB 2.0, HDMI, DisplayLink, DVI
Nkọwa - Maingear Shift Super Stock X99
Dec 15 2014 - Maingear bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ndị ahụ dị iche iche na-eme ka usoro desktọọpụ arụmọrụ dị mma maka ịgba egwu PC. Ntughari a bu otu n'ime usoro ha na-ere ubochi kacha mma. Ebumnuche ahụ anọgideghị na-agbanwe agbanwe maka afọ ole na ole gara aga ma ọ bụ n'ezie na ọtụtụ nhazi dị iche iche dị n'ime ya na AMD ma ọ bụ Intel procesors. Ụdị ihe oyiyi Super Stock na-enyekarị arụmọrụ dị elu karịa ụdị ndị ọzọ na-agụnye ihe ndị dị ka mmiri jụrụ oyi ma agbachachachaa ya na ọkụ ọkụ ka na-emezi ka a na-ahazi karịa ụkpụrụ.
Obi nke New Stock Mappingear Super Stock bụ ọhụrụ Haswell-E na X99 chipset. Nke a bụ Intel nke kachasị elu nke na-ewebata DDR4 ebe nchekwa na desktọọpụ iji mee ka bandwit nchekwa nchekwa dị elu. Usoro nke isi na-abịa na i7-5820K isii isi processor. Ugbu a, nke a na-agba ọsọ ọsọ ọsọ karịa I7-4790K Ivy Bridge na akpa anọ. Nke a pụtara na n'ọnọdụ ụfọdụ, gụnyere ụfọdụ egwuregwu, arụmọrụ ahụ nwere ike ịbụ obere . Mgbe o kwuchara nke ahụ, e nwere ngwa ndị ọzọ nwere ike iji uru ndị ọzọ iji nye ọrụ dị mma dị ka vidiyo desktọọpụ. Usoro a na-ekpuchi elekere ka ikwe ka ihe karịrị mkpuchi ma Maingear adịghị enye nke a site na ndabara dị ka ụfọdụ ndị ọzọ mana ọrụ Redline overclocking adịghị efu.
Ihe nchekwa data maka Super Stock X99 bụ n'ezie ihe ị ga-atụ anya na PC PC. Ọ na-egosipụta otu draịvụ kristal nke nwere ike ịdị na-adịghị enye ezigbo uru ọ bụla n'ihe banyere arụmọrụ ma ọ bụ ikike. O doro anya na ọ bụrụ na ọ ga-ezuru onye na-eji ya egwu egwu ma arụmọrụ na-ejighị ya tụnyere ụgbọala siri ike . N'ezie, enwere ọtụtụ nhọrọ iji melite nke a ma ọ bụ ikike dị elu nke siri ike draịva, ọkpụkpụ siri ike nke ala ma ọ bụ ọbụna ihe ngwakọ siri ike . E nwere ngụkọta nke ọwa mmiri isii ma enwere nhọrọ maka ọtụtụ ihe dị iche iche RAID iji melite arụmọrụ, redundancy ma ọ bụ abụọ. Dị ka mgbe niile, mmelite ndị a ga-ebufe ego ahụ. Enwere isii USB 3.0 ọdụ ụgbọelu maka ịgbasa nchekwa na mpụga nke ikpe yana. A na-ejikarị usoro ntanetị DVD akpọrọ ihe akpọrọ ihe nke ọma ma ndị a adịchaghị njọ maka PC n'oge ndị a.
Ugbu a, usoro ntinye aka nke Maingear bụ maka arụmọrụ karịsịa na egwuregwu PC. Nke a na-eme ka ọ bụrụ ihe mgbagwoju anya na isi usoro na-akọwa ihe dị mma NVIDIA GeForce GTX 750Ti kaadị ndịadị. Nke a bụ n'ezie kaadị na-emefu ego nke na-enye usoro ntanetị nke ọma maka ọtụtụ egwuregwu dị nnọọ mma na 1920x1080 mkpebi nke nyocha ọ bụla ma ọ gaghị enwe ike inwe nzacha ọtụtụ nzacha. O doro anya na ha na-enye ọtụtụ nhọrọ mgbe ọ na-abịa ịkwalite kaadị kaadị dị elu maka ndị na-achọ iji ọtụtụ ndị nlekota ma ọ bụ ngosipụta 4K . Ọ bụ naanị nhụsianya na ọ dịghị abịa na ọkwa kaadị dị elu. Ndị na-achọ iji kalịnda kaadị nwere ike ịchọrọ ịkwalite nhazi ahụ dị ka ọ dị naanị 28 PCI-Express lanes jiri tụnyere 40 nke dị mkpa maka kaadị atọ dị elu.
Ọnụahịa mmalite nke isi ihe dị elu nke Maingear Super Stock X99 bụ ihe karịrị $ 2400. Nke a dị mma ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere usoro dịka Mpaghara Alienware-51 ma ọ bụ iBUYPOWER Chimera 4SE-V1 kama ọ ka dị ọnụ ọnụ karịa Digital Storm Velox. Gburugburu-51 na-enye dịka ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ dị mma ịrụ ọrụ site na kaadị ndị ka mma. Ọnụ ọgụgụ Digital na aka ndị ọzọ na-abịa na njirimara nke njirimara arụmọrụ dị elu ma ọ bụrụ na mebere Maingear n'ụzọ yiri nke ahụ, ọ ga-enwe ihe ọbụla ọnụahịa. N'ihi ya, ọ bụ ezie na ọnụahịa ọtụtụ ndị dị nnọọ mma, ọ ka bụ otu n'ime usoro ndị dị oké ọnụ na ahịa.
Achọpụta: Apple nke abụọ ọgbọ iPad 2
Ụlọ Elu nke Ike: HP Z840 Ụlọ Ọrụ
Ihe na-emetụ n'ahụ: The 2016 Amazon Kindle
Acer Aspire AX3950-U2042 PC na Desktọpụ PC
Akwụkwọ dị elu: Laptọọpụ Ultrasonic nke Microsoft
Nyocha Gmail - Ọrụ Email Ntanye
Olee otú ndị ọrụ Microsoft si arụ ọrụ na Windows 10
Ndị na - eso ụzọ Twitter na - eduzi: A ruo Z nke Twitter Na - esonụ
Ọ bụ gam akporo ma ọ bụ iPhone Smartphone?
Mụta otu esi etinye agba agba na tebụl na okwu
Iji Mmasị Nchekwa Mmasị Achọpụta
Ihe omuma nke 7th Generation iPod nano Hardware
Iji Mgbapu na Boolean na Metadata Operators
Pụrụ Apple iPad Tablet Mee Voice Oku?
Olee otú mbanye anataghị ikike ụzọ gị n'ime gị onwe gị Kọmputa
Enwere ike Facebook na ọrụ gbanwee otú i si eji Microsoft Office?
7 Ihe Ngbaghara banyere Wii U
Inye Nchekwa Ọnụ Ahịa: Ụdị Nlekọta nke 2015
Nyochaa: Raumfeld One S Wi-Fi Ọkà okwu
Esi wepụ Atụmatụ na ngwa ndị ọzọ site na Ịmaghị ọkwa na iPad
Nwere ike ijikọ na Ịntanetị? Gbalịa Atụmatụ ndị a
The Web Dark: Gịnị mere ndị mmadụ ji eji ya?
Chọta ndị enyi ochie Iji Facebook
Nweta akaụntụ AOL Email na Outlook
4 Ngwaọrụ ndị a na-enweta iji nwetaghachiri Okwu Okwuntughe
© 2020 ig.eyewated.com